Mabhuku eYoutubers: ndeapi aripo uye yega yega yeububer munei mairi | Zvazvino Zvinyorwa
Un youtuber munhu anoita vhidhiyo paYouTube pasocial network. Nekudaro, kwenguva yakati ikozvino, kupfuura kungova maububhu, vazhinji vanosvetukirawo mune zvinyorwa zvinyorwa votora mabhuku avo ewaububhu.
Yazvino-yakaburitswa kana yekunyora, nhasi kune vazhinji vetubers vatora nhanho iyoyo uye vakakurudzirwa kuburitsa iro risinganzwisisike bhuku. Vazhinji vavo, vangangodaro huwandu hwakawanda, vanozvishambadzira, asi vamwe, avo vane simba rakakura, vakasainwa nevaparidzi vakuru kuti vatore nyaya dzavo. Unoda kuziva ndeapi mabhuku euububers aripo?
1 Nei uchitenga mabhuku kubva kuneyububers?
1.1 Sei mabhuku aya achibudirira kupfuura mamwe?
2 Youtubers mabhuku
2.1 ElRubius nemabhuku euububers
2.2 Monica Morán nebhuku rake
2.3 Kumhura vasikana
2.4 Luzu naLana
2.6 Wismichu uye ake eububers mabhuku
2.7 Dalas Ongororo
Nei uchitenga mabhuku kubva kuneyububers?
Kuverenga chiitiko icho, uye nekuwedzera, chinowana zvipingaidzo kusvika kune vana. Izvo zvekuti muzvikoro mazita emabhuku haana kuvandudzwa, kana kuti asingaite chiitiko ichi kukwezva kuvana, zvinoita kuti vatize kubva pairi.
Kana isu tikawedzera izvo kuverenga hachisi chinhu chinokurudzirwa kumba (Nekuti mudzimba shoma vashoma vanoshandisa nguva vachiverenga, vashoma uye vashoma vanoshandisa chikamu chemubhadharo wavo kutenga bhuku. Kana kuverenga bhuku rimwe chete pamwedzi.
Panyaya yevana nevechiri kuyaruka, ivo vanopedza nguva yakawanda vachitarisa zvirimo paInternet pane kuverenga. Uye ivo vanoteedzera "maoni" mazhinji ayo kwavari vanova vanhu vekutevedzera uye mienzaniso yekuti vangave sei kana vakura. Ndokunge, vanotevera hunhu hunobata maziso avo. Naizvozvo, pavanoburitsa bhuku, kunyangwe kana vasiri vaverengi, vanorida, nekuti ndechimwe chinhu nezvehunhu hwavanofarira, uye vanosvika pakuiverenga.
Saka zvakakosha here? Hongu, iyi inzira yekukurudzira vana kuti vaverenge, kunyanya kana vari ivo vanoikumbira uye vaine chido chakakosha kuti vaverenge nekuti munhu wavanodisisa akainyora (uye vanoda kuziva zvese zvakaiswa nemunhu bhuku).
Sei mabhuku aya achibudirira kupfuura mamwe?
Chaizvoizvo, nekuti ivo vanoteverwa nezviuru zvevanhu uye vane simba zvakakwana kuti vagadzire kutengesa kwezvigadzirwa zvavo. Muchokwadi, hazvisi chete kuti ivo vanotengesa mabhuku, asi ivo vanototengesa zvimwe zvakawanda zvigadzirwa.
ari vanokurudzira munharaunda dzekudyidzana vane hunyanzvi hwekukonzera vanhu, Nekudaro, pamusoro pekuwana mari kuYouTube uye nekumwe kubatana, mabhuku zvakare anova nzira yekuenderera nekubudirira kwavo.
Asi munhu wese anowana here? Kwete, chokwadi ndechekuti vashoma chete vanozivikanwa zvakakwana kuti vabate pfungwa dzevaparidzi kana mafeni kuti vatenge bhuku rako. Uye pazasi tinokupa iwe mienzaniso.
Heano mamwe emazana emabhuku iwe aunogona kuwana akanyorwa neweububers.
ElRubius nemabhuku euububers
Kwayaka: Iri boka reIT
ElRubius akazoita mukurumbira pasi rese nekutenda kune yake online vhidhiyo mutambo chiteshi. Zvakawanda zvekuti ndiye mumwe weyububers ane mukurumbira muSpain uyezve mumwe weavo vanowana mari yakawanda nekutenda kumamirioni ekuberekesa mavhidhiyo ake, vanonyoresa uye nezvaanoita. Saka yaingova nguva yakati rebei vaparidzi vasati vamuteerera kuti amuburitse kuburitsa mabhuku.
Uye chokwadi ndechekuti ine akati wandei pamusika. Imwe yeanonyanya kuzivikanwa i "Virtual Hero", bhuku rekufungidzira umo protagonist, "ElRubius", anotanga chiitiko pakati penyika yekunyepedzera neiyo chaiyo, achipasa bvunzo, achikunda vakaipa uye nekuponesa musikana.
Ipapo une "Bhuku reTroll", iri iro bhuku rekunyorera kwaanotaura pamusoro pechiitiko chake neYouTube uye panguva imwechete inobatsira avo kutanga nyika iyoyo.
Monica Morán nebhuku rake
Imwe yeweububers yaunogona kuverenga bhuku rake ndeMonica Morán. Musikana uyu anobva kuMusical.ly social network akazoita mukurumbira paakaisa vhidhiyo pasocial network uye mazana evanhu akatanga kumutevera. Munguva pfupi yakapfuura vateveri miriyoni imwe uye imwe pasocial network yakadai seYouTube yakabatsirwa neizvi kubvira pakatanga chiteshi kukwira mumaonero nevanyori.
Saka, akatora bhuku, Dhayari yemuser, kwaanotaura nezve "zvakavanzika" kuti abudirire pasocial network. Muchokwadi, haisiriyo yega ine. Iyo zvakare inoratidza "Behind Zvese. Izvo zvisina anomukurudzira anotaurira ", kwaanotaura nezve zvaakaona, mahwindo uye zvakawanda zvinokanganisa kuve iwetuber (kuona chakanaka uye chisina kunaka divi reanokurudzira).
Ehe, isu tiri kutaura nezve YouTube chiteshi iyo inoteedzerwa kwazvo nevana nevachiri kuyaruka nhasi. Uye zvechokwadi, iwo mavambo avanorarama aifanira kuburitswa mubhuku. A) Hongu Kutarisira vasikana kwakazvarwa. Hameno Lara uye kushamisa kusinganzwisisike kwaNiko.
Iyo inyaya yevasikana vemashiripiti uko chavanotsvaga iko kusekesa vateereri vavo (mune ino nyaya vaverengi) uye nekuda kweizvi ivo vanogadzira nyaya, senge mune ino kesi, apo munin'ina waLara, Niko, anonyangarika, uye anofanirwa kumuwana.
Luzu naLana vaviri matubhu, uye pamwe ndomumwe weanozivikanwa. Uye, sevanhu vaviri, ivo vanobata nenyaya dzerudo, basa, mhuri, hukama, shamwari, zvinokuvaraidza ... Mune mamwe mazwi, chimwe chinhu chine hukama ne "mukoma mukuru" kuitira kuti iwe uzive zvese zvinoitika.
Kana riri bhuku rako, "Zvinhu Zvandingati kune Wangu Mudiki," rinogona kunyatsoita kune vechidiki, nekuti rinopindura mibvunzo ingangovanakidze: maitiro ekukurira kunyara kutamba nerudo, kuwirirana newaimbova, maitiro ekubata nekudzora vabereki ...
Auronplay ndeimwe yeweububers, pamwe naElRubius, anonyatso kuzivikanwa paYouTube. Asvika pamusoro nekutenda kumamirioni evateveri vaanavo uye nevazhinji vanoona mavhidhiyo ake, vanofara nehuchenjeri hwake uye majee uye nekumukumbira zvimwe. Nechikonzero ichi, rimwe remabhuku ake (nekuti ane akati wandei) iri «De lo worst, lo mejor», bhuku rizere nekuseka uye nemazano akasiyana siyana. Hongu zvirokwazvo, Ive nekuchenjerera, nekuti yakazara nezviperengo zvikanganiso izvo zvingave zvisiri zvakanakira vana kudzidza.
Rimwe remabhuku ake "Auronplay, iro bhuku", nhoroondo yehupenyu hwemunyori kwaanotaurira hupenyu hwake kuti hwave chii uye kuti sei asvika kwaari izvozvi.
Wismichu uye ake eububers mabhuku
Kwayaka: Bepanhau reBasque
Imwe nzira yakateverwa yeYouTube muSpain ndeyeWismichu, ine mamirioni emaonero. Munyori waro, Ismael Prego, ane makore achizvipira kunzvimbo dzekudyidzana, achibata misoro yakasiyana siyana ine chekuita nevaraidzo. Uye ndokusaka, akaburitsa bhuku rake «Kana iwe ukakanda mapfumo pasi, unorasikirwa», «gwara» kuva nehupenyu hwekushandira paInternet uye kugona, pamwe kwete kurarama, asi kuva ne "hupenyu" pamusoro iyo mitambo pasina kuneta nayo kana Iwe unoenda kuburikidza nezviitiko zvinoita kuti uvarase.
Ichokwadi ndechekuti Dalas Ongororo ingangove imwe yeweububers iyo yabuda zvishoma kubva muchinyorwa chemhando dzemabhuku anoburitswa newetubers. Uye ndeyekuti ake «Vapoteri munguva», ndiye Chaizvoizvo fungidziro yesainzi, iko kunobata kufamba kwenguva. Nepakutanga iyo inokwezva kutarisa, chokwadi ndechekuti iyo nyaya inoshamisira zvakanyanya.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Mabhuku » Youtubers mabhuku
Oscar Ona akadaro
Mazhinji emabhuku akanyorwa uye anozvitsikisa-ega newaububers kazhinji haana kudzika munhoroondo yavo uye / kana zano, zvisinei, zvinotipa mukana wepedyo wekuziva zvakadzama maonero, zviitiko uye nzira yekufunga iyo vazhinji vanayo nezve dingindira . Semuenzaniso, bhuku "Chupa el perro", rakakurumbira youtuber reGerman Garmendia, rinotipa chiono nezve hupenyu hwake uye zvaakasangana nazvo semavhidhiyo ake, asi pamutengo wekuita kuti zvinyanye kufinha kune avo vajaira kudzika kuverenga uye kujekeswa.
Pindura kuna Oscar Oña
Bhuruu Jeans Mabhuku